स्वयंसेवक अनलाइन प्रेरणा पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन
हाम्रा मानिसहरु पारिवारिक जीवनको इन्जिन हुन्। हाम्रो सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति। उनीहरूले हाम्रो समुदायहरूको सेवा गर्छन् र उनीहरूको कामले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछन्।
हाम्रा स्वयंसेवकहरू हाम्रो कामको सबै पक्षमा व्यस्त छन्। स्वयंसेवाको माध्यमबाट हामी व्यक्तिहरूलाई सिक्न, सक्रिय हुन र समुदाय भित्रको तिनीहरूको बन्धन बलियो बनाउन सक्षम गर्दछौं। स्वयंसेवा मार्फत, पारिवारिक जीवनले हाम्रो क्षमता र जडानलाई सुदृढ बनाउँछ।
तपाईको नयाँ स्वयंसेवकको भूमिकाका लागि बधाई! हामी तपाईंलाई बोर्डमा पाउँदा खुसी छौं।
तपाईंले आफ्नो प्रोबेशन अवधिको अन्त्य हुनु अघि तपाईंको स्वयमसेवी प्रेरण पूर्ण गर्नु पर्छ। यसले समावेश गर्दछ:
1. प्रेरण - भूमिका र पारिवारिक जीवन
2. आचार संहिता र स्वीकृति
3. स्वयंसेवी नीति र स्वीकृति
4. स्वयंसेवक अनुशासन नीति र पावती
तपाईंले प्रत्येक चरण पूरा गरेपछि हामीलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा सूचित गरिनेछ। एकचोटि हामीले सूचना प्राप्त गरे कि तपाईंले आफ्नो स्वैच्छिक प्रेरणाको सबै चरणहरू पूरा गर्नुभयो हामी तपाईंलाई लिखित रूपमा पुष्टि गर्नेछौं। यदि तपाईंले तपाईंको सबै प्रेरणा चरणहरू पूरा गर्नुभयो र दुई हप्तामा हामीलाई फारम सुन्नुभएको छैन भने, कृपया सम्पर्कमा रहनुहोस्।
1। प्रेरण - भूमिका र पारिवारिक जीवन
तपाइँलाई तपाइँको पहिलो दिन रोल इन्डक्शन दिइनेछ। यसले तपाइँको भूमिकामा कार्यहरू कसरी गर्ने र तपाइँले स्वयम्सेवा गरिरहनु भएको सुरक्षा प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी दिन मद्दत गर्दछ। भूमिका प्रेरणा अनुहार आमने सामने दिइन्छ।
तपाईंले डिजिटल पारिवारिक जीवन प्रेरणा पनि पूरा गर्नुपर्नेछ। एक स्वयंसेवक समन्वयक द्वारा विवरण कुन मोड्युल तपाईंले शुरू गर्न आवश्यक छ, या त सेवाहरू वा गैर-सेवा प्रेरण। केवल ... केस्टनले यहाँ भनेको कुरा गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी तल उपयुक्त लिंक मा क्लिक गर्नुहोस् र "पारिवारिक जीवन" को लागी खोजी गर्नुहोस् अधिक चरणहरू गर्नुहोस् जुन १, २, etc आदि छन्…
सेवा प्रेरणको लागि लिंक
गैर सेवा ईन्डक्शनमा लिंक
२. आचार संहिता
प्रत्येक जो पारिवारिक जीवनको हिस्सा हो हाम्रो आचार संहिता बमोजिम व्यवहार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। कृपया हाम्रो आचार संहिता पढ्नुहोस् र तपाइँले पढ्नुभयो र हाम्रो आचार संहिता बमोजिम कार्य गर्न सहमत हुनुहुन्छ भन्ने फर्मलाई पूर्ण गर्नुहोस्।
यहाँ आचार संहिता पीडीएफ डाउनलोड गर्नुहोस्
आचार संहिता कोड लि Link्क
Vol. स्वयंसेवी नीति
पारिवारिक जीवन स्वयंसेवी कार्यक्रम स्वैच्छिक अष्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय मापदण्डहरु संग प al्क्तिबद्ध छ र तिनीहरू हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो स्वैच्छिक नीतिमा सम्मिलित छन्। कृपया पारिवारिक जीवनको स्वैच्छिक नीति पढ्नुहोस् र एकचोटि तपाईंले यो पढिसकेपछि स्वीकृति फारम भर्नुहोस्।
पीडीएफ लि Vol्क भोल नीतिमा *** यहाँ CTA डाउनलोड बटन चाहिन्छ
स्वयंसेवक नीति स्वीकृति लि Link्क
Vol. स्वयम्सेवक अनुशासन नीति
पारिवारिक जीवन स्वयंसेवकको रूपमा तपाईसँग गुनासो र अनुशासनिक प्रक्रियामा पहुँच गर्ने अधिकार छ। हाम्रो गुनासो प्रक्रिया कार्यस्थल आचरण नीतिमा रेखांकित छ र सबै परिवार जीवन स्टाफ, स्वयम्सेवक र ठेकेदारहरूलाई लागू हुन्छ। स्वयंसेवी अनुशासन नीति एक छुट्टै प्रक्रिया हो जुन स्वयंसेवाहरूलाई मात्र लागू हुन्छ। कृपया पारिवारिक जीवन स्वैच्छिक अनुशासनी नीति पढ्नुहोस् र एकचोटि तपाईंले यो पढिसकेपछि स्वीकृति फारम भर्नुहोस्।
स्वयंसेवक अनुशासन नीतिमा पीडीएफ लि link्क *** यहाँ CTA डाउनलोड बटन चाहिन्छ
स्वयंसेवी अनुशासन नीति पालना लिंक
यदि तपाइँसँग प्रक्रिया भर मा केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया एक स्वयंसेवी संयोजक संग सम्पर्क राख्नुहोस्:
फोन ० 03 8599 5433 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX। बाट
तपाईको स्वयंसेवक प्रेरण पूरा गर्न को लागी धेरै धन्यवाद - हामी तपाइँलाई छिट्टै स्वागत गर्न तत्पर!